Fifamoivoizana Huiquan Facilities
VIDEO LEHIBE BE
Ny bolts dia voafaritra ao amin'ny ANSI B1.13M ho an'ny fandeferana amin'ny grady 6 g. Ny fitaovana Bolt dia mifanaraka amin'ny ASTM ...
Ity lahatsoratra ity dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ...
Ny arofanina dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny mat ...
Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa).
Ny fitsaboana eto an-tany dia naroboka mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'ny AASHTO M111, EN1461 sns. Afaka mampihena ny herin'ny fiatraikany izany raha toa ka tafakatra ny loza.
Ny faran'ny terminal dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa).
Ny bolts dia voafaritra ao amin'ny ANSI B1.13M ho an'ny fandeferana amin'ny grady 6 g. Ny fitaovana Bolt dia mifanaraka amin'ny ASTM F568M ho an'ny Kilasy 4.6. Ny fitaovana ho an'ny fehikibo azo atsofoka dia mifanaraka amin'ny ASTM F 568M ho an'ny kilasy 8.83. horonan. Ny fitsaboana amin'ny tany dia manaraka ny AASHTO M232.